အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်မှ သွေဖယ်ခြင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
(July 1 2013 တွင် ထွက်ရှိမည့် Time မဂ္ဂဇင်းပါ “The Face of Buddhist Terror” ကို မူရင်း အ တိုင်း မြန်မာ့ခေတ်မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
တိုက်ခိုက်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း သည်းခံခြင်း တို့ကြောင့် ကျော်ကြားသည့် ဘာသာတရား ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစု အာရှနိုင်ငံ များတွင် မွတ်ဆလင် အများအားဖြင့် ဆန့်ကျင်သည့် ဆူပူမှုနှင့် သည်းမ ခံရန် ဟောပြောမှုကို ဘုန်းကြီးတို့က လုပ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
ဗမာ ဘင်လာဒင်ဟု အမည်တပ် ခံရသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီး တစ်ပါး မျက်နှာက ရုပ်တု မျက်နှာ ကဲ့သို့ တည်ငြိမ်ပြီး ကြည်လင် နေပြီး တရားစ ဟောသည်။ သူ့ရှေ့တွင် ဒကာ ဒကာမ များရာနှင့် ချီရှိနေပြီး လက် အုပ် မိုး ကာ၊ ကျောပြင်များ၌ ချွေးစေးများ စီးကျ နေကြသည်။
ဘုန်းကြီးက “ခုချိန်ဟာ ငြိမ်နေရမယ့် အချိန် မဟုတ်တော့ဘူး” ဟု အမုန်းတရား ပြည့်နှက် သည့် လေ သံနှင့်ပြောသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစု နေထိုင်သည့် ဤမြေမှ မွတ်ဆလင် လူနည်းစုအား မုန်းစေမည့် စ ကား များကို နည်းလမ်း ပေါင်းများစွာနှင့် တစ်နာရီခွဲခန့် ဟောပြောသည်။
“ခုချိန်မှာ မင်းတို့ သွေးတွေ ဆူလာအောင် ထကြွရမယ့် အချိန်ပဲ” ဟု ပြောကြားသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များ၏ သွေးများ ဆူပွက် နေပြီး မွတ်ဆလင် အများစု သွေးများလည်း ဖိတ်စင် ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအုပ်သည် ကိုးကွယ်မှု မတူသည့် လူနည်းစုကို ဦးတည် တိုက်ခိုက် ကြပြီး ဦးဝီရသူနှင့် အခြား သဘောထား တင်းမာသည့် ဘုန်းကြီး များက ဘာသာရေး ဝါဒီ မီးတောက်ကို မီးလောင် လေပင့် ပေးခဲ့ ကြသည်။
အစိုးရ စာရင်း ဇယားများ အရ မွတ်ဆလင် များစွာ သေဆုံး ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ တကာ လူ့အခွင့် အရေး လုပ်သား များက ရာနှင့်ချီ၍ စာရင်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။ ပဋိပက္ခသည် ဦးဝီရသူ နေထိုင်ပြီး တရား ဟော သည့် နေ ရာ များတွင် ဆက်လက် ပျံ့နှံ့ ခဲ့သည်။
၎င်းအစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးသည် သန်းခြောက်ဆယ်ခန့် နေထိုင် ကြသည့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး ငါးရာခိုင်နှုန်း ရှိသည့် မွတ်ဆလင် များသည် နိုင်ငံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှု အဖြစ် မြင်နေ သည်။
“မွတ်ဆလင် တွေဟာ သွားဖွားနှုန်း အရမ်းမြန်တယ်၊ ပြီးတော့ ဦးဇင်းတို့ လူမျိုး အမျိုးသမီး တွေကို ခိုးယူ တယ်၊ အဓမ္မကျင့်တယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
“သူတို့တွေက ဦးဇင်းတို့ နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက် ချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဦးဇင်းက သူတို့ အဲလို လုပ်မှာကို ခွင့် မပြု နိုင်ဘူး၊ ဦးဇင်း တို့ဟာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိ ရမယ်”ဟု ဆက်လက် ပြော ကြားသည်။
ထိုကဲ့သို့သော အမုန်းတရား ဟောပြောမှု များကြောင့် ရာစု နှစ်ဝက်ကြာ စစ်အုပ်ချုပ်မှုမှ လွတ်မြောက် ခါစ ရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသား ၁၃၅မျိုးခန့် နေထိုင် ကြသည့် မြန်မာ နိုင်ငံ အဖို့ အထိ မခံသည့် နိုင် ငံရေး ဂေ ဟ စနစ်ကို ခြိမ်းခြောက် နေသည်။
တချို့အစိုးရ အရာရှိ များက ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး များအား ကလေး နှစ်ယောက်သာ ယူရမည့် အစီ အစဉ်ကို တောင်းဆို နေကြပြီး နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ရှိ ခရစ်ယာန် အများစု ကလည်း မကြာမီ က ဖြစ် ပွား သည့် ဗမာစစ်တပ်နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် ကချင် စစ်တပ်ကြား တိုက်ခိုက်မှု များသည် ဘာ သာရေး ကွဲပြားမှု အားဖြင့် ပိုမို ဆိုးဝါး လာစေကြောင်း ဆိုသည်။
ဗမာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား ထောင်ပေါင်း များစွာ လုပ်ကိုင်ကြသည့် မလေးရှားတွင် ဇွန်လ အစောပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာများ အသတ်ခံ ရပြီး နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ပွားသော ပဋိပက္ခ များသည် နယ်စပ် ကို ကျော်လွှား သွားသည်။ မလေး အာဏာပိုင် များက မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း မွတ်ဆလင် သေဆုံး ခဲ့မှုများ အ တွက်ပြန်လည် လက်စားချေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှု များတွင် ဟိန္ဒူ အမျိုးသားရေး ဝါဒ၊ မွတ်ဆလင် စစ်သွေး ကြွများ၊ ခရစ်ယာန် အခြေခံ သမားများနဲ့ ဂျူးဘာသာရေးရိုးရာ နည်းဥပဒေ လိုက်နာမှုများရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အ စွန်းရောက် မှုများ လွတ်ကင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အကြမ်းမဖက်ရေး မေတ္တာတရား တို့သည် လွန်ခဲ့ သည် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော်က ဗုဒ္ဓ ဟောကြား ခဲ့သည့် ဝါဒများ ဖြစ်သည်။
သက်ဦး ဆံပိုင် ဘုရင် များနှင့် ဖိနှိပ်သူတို့ကြား အာရှ နိုးထ လာသောအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီး များသည် ကိုယ်ကျင့် တရား ပညတ်ချက်နှင့် ဝိနည်း များဖြင့် ကိုလိုနီ ဆန့်ကျင် လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင် ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်ကြာ ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်နေသော တောင်ပိုင်း အစိုးရအား ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသည့် အနေနှင့် တပလ္လင်ခွေ ထိုင်ကာ အသေခံ မီးရှို့ခဲ့သည့် ဗီယက်နမ် ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးသည် စံပြဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒပြပွဲကို ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးဆောင် ခဲ့ကြပြီး သပိတ်မှောက်သည့် ဘုန်းကြီး များသည် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်း ကြသည်။ တိုက်ခိုက်သည့် စစ်သား များက လွဲ၍ ၎င်းတို့အား ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ မေတ္တာ များစွာ ပေးခဲ့ကြသည်။
ဘာသာရေး တိုင်းသည် အခြေခံ သဘော တရား များနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အတွေး များဖြင့် အဆိပ် သင့် သည့် ပျက်စီးမှု အားများဖြစ် သွားစေ နိုင်သည်။ ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာ အလှည့် ရောက် လာ ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ ဘုန်းကြီး များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူအုပ် ရှေ့တွင် ဘုန်းကြီးများ ဦးဆောင်ခဲ့ ကြပြီး တချို့က ပဋိပက္ခ အတွက် အာဏာပိုင် များအား သံသယ ရှိခဲ့သော်လည်း အစိုးရပိုင်းက ငြင်းဆို ထားသည်။
အကြမ်းဖက် မှုများ တိုးများ လာသောအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် ယုံကြည်မှု စွမ်းအားနှင့် ဘာ သာရေး ဝါဒကို ကျော်လွှားမည် ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ရရှိပါမည်လော။
အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆန့်ကျင်သည့် ၎င်း၏ နောက်လိုက်များအား ထကြွစေမှုကိုဦးဆောင်စေ ခဲ့သည့် အ စွန်းရောက် မြန်မာ ဘုန်းကြီး ဦးဝီရသူ၏ မုန်းတီးရေး တရား များကို ကျော်လွှား နိုင်မည်လော။
ကမ္ဘာ ဝန်းကျင်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်မျှော်နေသည်။
Ref: TIME (www.time.com)
Translated by ATL
မြန်မာ့ခေတ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ မူရင်းလင့်ခ် ။ ။ http://themyanmaage.com/?p=8069
This entry was posted on June 23, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← သင်္ကန်းဝတ် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ သည် စနစ်တကျကြိုတင် စီစဉ် ကာ လူသတ်မှု များ ကို ဆက်တိုက် ကျူးလွန်နေကြကြောင်း စင်ကာပူထုတ် စထရိတ်တိုင်မ်း သတင်းစာ မှ တရားဝင် ရေးသား	Time မဂ္ဂဇင်း ဖော်ပြချက် အပေါ် မြန်မာလူထု အမြင် →